Isticmaalka Maareynta Hantida Dijitaalka ah si loo Jaangooyo Hormarinta Bulshada | Martech Zone
U Adeegsiga Maareynta Hantida Dijitaalka ah toosinta Hormarinta Bulshada
Khamiis, Janaayo 30, 2014 Khamiis, Janaayo 30, 2014 Douglas Karr
Waxaan haynaa laba macmiil hadda oo haysta malaayiin macaamiil ah waddanka oo dhan. Cadaadiska lagu doonayo in lagu miisaamo istiraatiijiyadda warbaahinta bulshada ee dhiirrigelisa, ka jawaab celisa isla markaana ka jawaab celisa baaxadda shabakadda ma aha hawl yar - runtiina waa wax aan macquul ahayn iyada oo aan la isticmaalin aaladda shaqada iyo otomatiga.
Maxay ganacsatadu garan la 'yihiin in qalabka wax lagu duubo iyo aaladda shaqada si loo fududeeyo awoodda helitaanka, oggolaanshaha iyo daabacaadda waxyaabaha ay soo saaraan isticmaaleyaashu horeyba u jireen. Waxyaabaha ay soosaaraan isticmaaleyaashu (UGC) waa wax laga naxo maxaa yeelay waa wax bilaash ah oo shirkadda ka taageera dhinac saddexaad. Uma baahnid inaad raadsato raadinta - waxay horeyba uga jirtay baraha bulshada!
XIDHIIDHKA BEAM, oo ka wakiil ah MINI USA, wuxuu isku daraa shabakadaha warbaahinta bulshada (sida Facebook, Twitter iyo Instagram), aaladaha aaladda shaqada ee leh isku xirayaasha daruuraha (sida IFTT.com), qalabka wadaagga faylalka (sida Dropbox) iyo maareynta maareynta hantida dijitaalka ah si loo soo ururiyo waxyaabaha ku jira Maktabadda hantida dijitaalka ah ee ku shaqeeya fidinta.
Adeegga Widen ee Widen # 1
Macaamiisha MINI waxay abuurayaan oo la wadaagayaan sawirrada MINI-da. Sawiradani waxay ka jiraan shabakado badan oo bulsheed waxayna u baahan yihiin in meel loo dhigo oo la abaabulo si loo isticmaalo. BEAM waxay isticmaashaa IFTT.com iyo is dhexgalka fidinta ee Dropbox si loo daaweeyo waxyaabaha ay soo saaraan macaamiisha iyagoo daawanaya hashtagyada warbaahinta bulshada.
BEAM waxay hirgelisay Widen DAM waxayna sameysay hago shaqo, iyadoo la adeegsanayo Is-dhexgalka Widen's Dropbox, si looga helo waxyaabaha laga helo Instagram, Facebook iyo Twitter isla markaana si fudud loogu celiyo waxyaabaha ka kooban MINI ololeyaal badan.
Adeegga Widen ee Widen # 2
MINI waxay ubaahantahay meel mulkiilayaasha MINI inay kusoo gudbiyaan waxyaabaha fiidiyowga ah ee tartanka ah. Fiidiyowyadan waxay u baahan yihiin inay dib u eegaan Kooxda MINI ka hor inta aan lagu soo bandhigin websaydhka. BEAM waxay isu geynaysaa waxyaabaha macmiilku soo saaray ee loogu talagalay tartamada MINIUSA.com kadibna waxay soo bandhigeysaa waxyaabo kala duwan oo ku saabsan shaxdeeda soo gudbinta dadweynaha.
Dogob loo isticmaalo ka mid ah Widen API si loogu oggolaado soo gelinta waxyaabaha fiidiyoowga ah, xalka Widen DAM, toos uga MINIUSA.com. Waxyaabaha fiidiyoowga ah waxaa si toos ah loogu gudbiyaa Widen DAM halkaasoo dib loogu eego kadibna lambarrada Widen ee lagu duubay fiidiyowga ayaa loo adeegsadaa fagaaraha dadweynaha ee MINIUSA.com.
Daah-: Waxaan Widen kala soo shaqeynay xeelado suuq geyn infographic iyo email horay ah. Iyagu waa dad wanaagsan oo wax soo saar weyn u leh hay'ad kasta ama shirkad ganacsi oo u baahan inay maamusho hantida dijitaalka ah. Marka laga reebo kiisaska isticmaalka, hubi inaad aragto macluumaadkooda, Kiiska Ganacsi ee Maareynta Hantida Dijital ah si loo fahmo wax badan.
Tags: APIdogobdogob dhexdhexaad ahxidheenkadam apimaaraynta hantida dijitaalka ahsanduuqa hoos loo dhigoiftttInstagramFiidiyowyada SuuqgeyntaminiminiusauGCwaxyaabaha ka kooban isticmaalefidinfidin api
Dhimashada Degdega ah ee Suuqgeynta Dibedda